अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ? बाट दिक्क भएकी केकी - Forseenetwork : Nepalko entertainment web site : nepali cinema & Gossip : nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : nepali art ,music , manoranjan & more
loading... अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ? भनेर सोध्दा उनले भनिन् अहिले म सिनेमाको प्रचाप्रसारमा हिँडिराखेको छु । त्यसपछि हामीले उनलाई मिडियाको कुन प्रश्नले तपाईँ दिक्क हुनुहुन्छ भनेर सोध्यौँ । यसको जबाफमा उनले भनिन्, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसपछि उनी एकछिन मज्जाले हाँसिन् । किनकी हामीले पनि उनीसँग कुरा सुरु गर्दा त्यहि प्रश्न गरेका थियौँ, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ? यो प्रसंग हो नायिका केकी अधिकारीसँग भएको कुराकानीको । सिनेमा लभ सासाको प्रचार प्रसारमा हिँडेकी केकीसँगको कुराकानीबाट हामीले उनका व्यक्तिगत कुराहरु जान्ने प्रयास गरेका छौँ । कुराकानीका क्रममा हामीले उनको रुची, उनलाई मन पर्ने, मन नपर्ने कुराहरु थाहा पाउने गतिलो प्रयास गरेका छौँ ।